DEG DEG-Ra’iisul Wasaare Khayre oo war deg deg ah oo soo saaray runtana u sheegay beesha caalamka. – Puntland News
Home 2017 April 21 Somali News DEG DEG-Ra’iisul Wasaare Khayre oo war deg deg ah oo soo saaray runtana u sheegay beesha caalamka.
DEG DEG-Ra’iisul Wasaare Khayre oo war deg deg ah oo soo saaray runtana u sheegay beesha caalamka.
April 21, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 2
2 thoughts on “DEG DEG-Ra’iisul Wasaare Khayre oo war deg deg ah oo soo saaray runtana u sheegay beesha caalamka.”
Abdirahman Barre April 22, 2017 at 4:49 am · Edit
Turkey abaal weyn ayuu somaalida u galay waana lama illaawaan,weliba in beesha caalamka layska illaawo oo turkiga lagu xidhnaado ayaa fiican
Nuh April 22, 2017 at 6:22 pm · Edit
Abdi walaal waa runtaa Dowlada Turkiga iyo kuwa la mid ah intaba abaal bey inagu leeyihiin, inkastoo Aadanaha koonkan dul joogaa aaney ku badneyn Cid abaalkii loo galaa celisa. Tan-kale Beesha Caalamka ma kala maarano Abdi”waayoo waxa jira nidaamyo kala duwan oo dowli ah, Dadkeenu inta badan aaney fahmi kareyn, kuwaas oo la xiriira Siyaayada oo aynaan marnaba ku kala maarmi kareyn, marka waa aynu uga dambeynu qaar ka mid ah dakeena wuwa iyagi kaartada la fahmaya.